Iimpawu kunye namacebo okukwazi ukuba mhle ngakumbi | Amadoda aQinisekileyo
Ngelishwa, ubuso esizalelwe ngabo buya kuba nathi ebomini. Singaya kwindawo yokuzivocavoca kwaye sisebenze imizimba yethu, siyilolonge, yandisa ubunzima bethu bemisiphanjl. Nangona kunjalo, asinakho "ukwenza ubuso." Kodwa esi ayisosizathu sokuba sizivumele boyiswe bubuso ekufuneka sibuphethe. Kukho iingcebiso esinokuzilandela ukuze zikhangeleke ngakumbi ngaphandle kokuba mhle.
Kule nqaku siza kukufundisa njani ukuba mhle ngakumbi ngeendlela ezithile ezilula. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngayo? Qhubeka ufunda.
1 Isimo sengqondo esingcono kunye nobuntu
2 Imiba yangaphandle
3 Zenzele esakho isitayile
4 Ucoceko lomntu
Isimo sengqondo esingcono kunye nobuntu
Ukuba mhle ayisiyiyo nje ukuba nobuso obugqibeleleyo obuhlangabezana nokufana komlinganiselo wegolide (jonga Amadoda amahle kakhulu emhlabeni). Unokuba nomtsalane kwaye unomdla kwabanye abantu ngaphandle kokufuna ukuba mhle. Indlela ye ubuso bakho ayisiyiyo kuphela into etsala ingqalelo kwaye eyenza ukuba umntu abe nomtsalane. Ke ngoko, akwanele ukujonga nje okuhle kwaye unoncumo olutsala amehlo.
Isimo sengqondo somntu simisela kakuhle kolu hlobo lweemeko. Hayi ukuba nesimo sengqondo esifanelekileyo, kodwa ukukwazi ukusombulula iingxaki kunye nokuzimisela. Ukwabelana ngamaxesha akho amnandi nabanye abantu kwaye ubakhathalele yinto etsala abanye abantu. Ukuze ubonise ubuntu obunomtsalane kunye nokuzithemba, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuzithemba. Nokuba awumhle kangako, unokunika ezinye izinto ezintle ebantwini kwaye, ngaphezulu kwako konke, Kufuneka uqiniseke ngesiqu sakho kwaye ungoyiki "bazothini."
Iimpahla, iinwele kunye nendlela ococeke ngayo akunakukunceda ukuba uzithembe. Kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi imida yakho kwaye unakho ukwenza ntoni. Ukungabinazintloni zokubonisa ukuba unjani, izinto ozithandayo kunye nobuntu bakho xa bebonke kubaluleke kakhulu ukuze abanye babe nembono entle ngawe. Ungalibali ukuba le ntembelo yesiqu sakho ayinakuze yenziwe, njengoko kuya kunyanzelwa. Kufuneka ivele ngaphakathi kwaye inyaniseke ngokupheleleyo.
Ngenxa yokuphuhliswa kwetekhnoloji kunye notshintsho kwindlela esiphila ngayo, siqhele ukuba nezikhundla ezingayilungelanga impilo yethu. Sihlala sizingela ngaphezulu kwaye sichitha iiyure kunye neeyure kwizikhundla ezimbi phambi kwezikrini ezifihlakeleyo. I-Slouching ayibangeli kuphela iingxaki zomqolo ekuhambeni kwexesha, ikwenza ubonakale njengendoda engenakho ukuzithemba kwaye kulula ukoyisa.
Ukuhlala nkqo okanye ukuhamba nkqo kunokubonisa ukuzithemba ngokungangqalanga. Ezi ntlobo zezinto zithathwa njengelwimi olungathethiyo. Inye izisasaza ngaphandle kwesidingo samagama. Indoda ethe tye iyakwazi ukuhambisa ukhuseleko kunye nesibindi.
Enye into ebalulekileyo yangaphandle luncumo. Ngokucacileyo akufuneki uncume ngendlela yokunyanzelwa ukuba awuziva unjalo. Nangona kunjalo, ukuncuma kuhlala kumenza umntu abonakale onwabile, ezithembile, kwaye enobuhlobo. Ukongeza, kufanelekile ukubathintela ekuboneni udiniwe ukusuka kwimini yakho ukuya kwimini okanye emsebenzini wakho okanye ukuba ulusizi.
Xa uthetha nomntu, kufuneka umjonge emehlweni. Ngaphandle kwenyani yokuba ngumbandela wemfundo, iya kukubonisa ukuba uzithembile kwaye uzikhusele. Kwaye ayingombandela wokujonga umntu. Kukulungele ukumjonga emehlweni, ekugqibeleni ujonge nakwezinye iinxalenye zobuso bakhe.
Zenzele esakho isitayile
Isinxibo yinto ebalulekileyo yento oza kuyibonisa phambi koluntu. Kubalulekile ukuba isitayile sakho sesakho kwaye ungagqibi usebenzisa iindlela zabanye abantu zokunxiba. Uhlobo lwesinxibo alubalulekanga ngendlela onxiba ngayo. Ayinakuphepheka into yokuba, ukuba ukwiminyaka ethile, akucebisi ukuba unxibe njengabantu abancinci, kuba uyakubonisa kuphela ukuba ungumntu ozama ukubuyisa ulutsha olulahlekileyo.
Ukuba awuyazi indlela yokusebenzisa isitayile sakho, jonga abanye abantu. Elinye icandelo leengcebiso kukuba abantu basetyhini bajonga izihlangu zabantu kancinci. Nangona kunjalo, le yinto encinci ethathelwa ingqalelo ngabantu abade. Qiniseka ukuba ukhetha uhlobo lwezihlangu oluhle kwaye oluhambelana nayo yonke impahla yakho.
Ukuba ungomnye wabo bantu bangakwaziyo ukukhetha iimpahla, kodwa banemali yokusiba, Unokuqesha i-shopper yobuqu. Aba bantu ngokubanzi banobuchule ekufumaneni isitayile sabanye abantu. Uya kumhlawula ukuba akhethe eyona mpahla iphambili ukonyusa isitayile sakho.
Izixhobo ziphantse zabaluleka njengezinye iimpahla. Isangqa, isangqa, iqatha, njl. Zizinto zokufikelela ezinokwenza umahluko phakathi kwabanye abantu. Unokwaziwa ngokuba ungoyena mfana uhlala enxibe isongo esithile. Ungalibali ukuba ukuthetha kakuhle nokubiza onke amagama ngokucacileyo kunokuba nomdla kumntu okuphulaphuleyo.
Ukuba mhle ayisiyompahla yakho kunye nobuntu bakho. Ucoceko lomntu luyinto emiselweyo ukuba sifuna ukuba nomtsalane. Yayo, ukugcina iinzipho nezandla zakho zicocekile kubaluleke kakhulu. Ngaphambi kokutya, ukuphuma okanye ukungena endaweni, kungcono ukuhamba uhlambe izandla kwaye uzilungise iinzipho zakho kwaye ucocekile.
Ukudibanisa kunye nokuhlamba iinwele yenye yezinto ezibalulekileyo. Ndiyakuqinisekisa ukuba umntu oneenwele ezityebileyo kwaye ezikame kakubi wenza umbono ombi kakhulu. Ukuhlamba iinwele kanye emva kweentsuku ezimbini kunye nokunyanga inkwethu kunye / okanye ioyile ukuba unayo yinto eluncedo kakhulu. Ukuphefumla yenye inkalo ekufuneka uyiqwalasele. Ukuhlanjwa kwamazinyo kunye nokujoja okutsha kuya kukwenza uzive uzithemba ngakumbi xa uthetha nabantu.
Okokugqibela, ukuhamba ucocekile kwaye uchebe yenye indlela efanelekileyo yokuba ube mhle ngakumbi.
Ndiyathemba ukuba zonke ezi ngcebiso zinokukunceda ukwazi ukuba mhle njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Unokuba mhle ngakumbi
Ukunciphisa isinqe emadodeni
Iikhondom zikaMercadona, zithembekile?